Buugga Buugga Fasaxa Xagaaga ee Fasalka 2aad | RayHaber | raillynews
HomeWarqad Hordhac ahBuugga Buugga Fasaxa Xagaaga ee Fasalka 2aad
Buugga Buugga Fasaxa Xagaaga ee Fasalka 2aad
30 / 04 / 2020 Warqad Hordhac ah, TURKEY
buugga fasaxa fasaxa xagaaga
2 buugga fasaxa fasaxawaa gole ujeedadiisu yahay inuu ku celiyo cashar kasta iyo maado ay ardayda dhigata dugsiga hoose ee 2aad ay wax ku bartaan sanad dugsiyeedka oo ay ku xoojiyaan macluumaadka halkaas ku yaal. Caadi ahaan Buugga fasaxa fasaxa xagaaga 2-aad Caruurta si joogto ah wax ula barata barnaamijka waxay dib u bartaan koorsooyinka Turkiga, Xisaabta, Ingiriisiga iyo Sayniska Sayniska Nolosha iyo maaddooyinka lagu soo qaatay koorsooyinkaan, kuwaas oo lagu soo daray manhajka fasalka 2aad ee MoNE.
Waxaad qiyaaseysaa, si sax ah sababtan Buugga fasaxa fasaxa xagaaga 2-aad runtii waa ahmiyad weyn; Si kastaba ha noqotee, ku celcelinta casharrada iyo mowduucyada maahan shaqadiisa iyo hadafkiisa. On lid ku ah, Buugga fasaxa fasaxa xagaaga 2-aadwaxaa ku jira wax badan oo dheeri ah oo u dhexeeya bogaggiisa.
Faa'iidooyinka Buugga Fasaxa Xagaaga Fasalka 2aad
Buugga fasaxa fasaxa xagaaga 2-aad Faa'iidooyinkiisa ayaa ka kooban waxyaabo kala duwan. Gaar ahaan, in la bixiyo tusaalooyin, Buugga fasaxa fasaxa xagaaga 2-aad Shuruudo ku habboon ayaa la abuuri karaa iyada oo ujeedadu tahay in la helo xirfado mustaqbal horay loo sii eego Mid ka mid ah awoodahan waa “akhriska miyir-qabka” awooda aan kulano dhammaan qeybaha nolosha. Buugga fasaxa fasaxa xagaaga 2-aad Qoraallada lagu bixiyay macnaha guud ee casharka Turkiga iyo su'aalaha la xiriira, cunuggu wuxuu fursad u helaa inuu qaabeeyo awoodiisa akhris, kaasoo uu ku soo qaatay sanadkii ugu horreeyay ee sannadka koowaad. Dhinac, inta uu ku ordo xawaare si uu wax u aqriyo, cunuga wuxuu helaa fursad uu ku raadiyo jawaabaha su'aalaha la xiriira iyo muujiyo inta uu garanayo qoraalka oo dhan.
Intaa waxaa dheer Buugga fasaxa fasaxa xagaaga 2-aad Ilmaha ayaa mahad leh, cunuggu wakhti dheer ayuu kujiraa maskaxdiisa si firfircoon wuxuuna uga fogaanayaa caajisnimada inta lagu jiro fasaxa xagaaga, taas oo sababi doonta in macluumaadka si dhib yar loo tirtiro haddii aan si wanaagsan loo qiimeynin. Tani waxay u oggolaaneysaa isaga inuu xasuusto inta badan macluumaadka uu bartay sanadka oo dhan, iyo inuu si fudud u diyaariyo una waafajiyo fasalka 3.
Natiijo ahaan Buugga fasaxa fasaxa xagaaga 2-aad Thanks to this, ardayda yar ma aha oo kaliya inay xoojiyaan casharadooda sanadka 2aad, laakiin waxay sidoo kale horumariyaan akhriskooda iyo xirfadaha fahamkooda waxayna fursad u leeyihiin inay isu diyaariyaan sanadka soo socda iyagoo helaya edbinta maskaxda. Waxaas oo dhan Buugga fasaxa fasaxa xagaaga 2-aad waa suurta gal in wax dhacaan; shuruudda keliya ayaa ah in goaankani yahay mid tayo wanaagsan Buugga fasaxa fasaxa xagaaga 2-aad Ma aha.
Sidee buu noqonayaa buugga fasaxa fasalka 2-aad xagaaga?
Tayo wanaagsan Buugga fasaxa fasaxa xagaaga 2-aad Markii la yiraahdo, dukaan macluumaad oo la jaanqaada manhajka Wasaaradda Waxbarashada, oo lagu diyaariyey macluumaadka hadda jira, oo daboolaya dhammaan maaddooyinka maaddooyinka waaweyn iyo ku habboon heerka ilmaha (marka laga hadlayo xagga barbaarinta iyo aragtida). Laakiin taas, Buugga fasaxa fasaxa xagaaga 2-aadsidoo kale waa inay isbedel ku sameysaa qiimaheeda dheeriga ah.
Waxaa lagu magacaabi karaa "wanaagsan" Buugga fasaxa fasaxa xagaaga 2-aadwaa inay lahaato daabac tayo leh, midabyo firfircoon, muuqaal hodan ah, nashaadaadyo kala duwan, marka la soo koobo, nuxurka aan gafin doonin ama xitaa ku dhiirigelin doonin cunugga cunugga waxbarashadiisa. Madadaalo inta wax la barayo Buugga fasaxa fasaxa xagaaga 2-aadwaxay muhiim u tahay guusha iskaa ah.
Marka laga hadlayo waalidiinta iyo macallimiinta Buugga fasaxa fasaxa xagaaga 2-aadWaa inay noqotaa mid dhaqaale iyo sidoo kale lahaanshaha dhammaan astaamahaan. Marka, kheyraad leh tayo tayo sare leh ayaa la heli karaa iyadoon la dhaafin miisaaniyadda.
Halkan waxaa ah dhamaan waxyaabahan aan soo xusnay ilaa iyo waxbadan oo la yaabka leh, Macallinka Guriga Fasalka 2aad ee Fasalka Xilliga Xilliga Xagaaga Waxay ku qarsoon tahay waxa ku jira.
Macallinka Guriga Fasalka 2aad ee Fasalka Xilliga Xilliga Xagaaga
Tayada ugu sareysa suuqa Buugga fasaxa fasaxa xagaaga 2-aadsidoo kale loo yaqaan oo lagu taliyo dadka isticmaala Macallinka Buugga Fasaxa Guriga sets Waxay hoy u tahay fursadaha aadan doonayn inaad seegtid. Marka lagu daro seddex buug oo kala duwan, oo ay ku jiraan koorsooyinka aasaasiga ah iyo mowduucyada, sidoo kale waxaa jira saddex Buug-yareyn Qiimeyn Muddada ah Juun, Luulyo iyo Agoosto. Markaa, adoo la shaqeynaya golahan, manhajka fasalka koowaad ee dugsiga hoose ayaa lagu celcelinayaa dhinac kasta oo laga dhigay mid joogto ah. Waxaa intaa dheer, oo dhan Buugga fasaxa fasaxa xagaaga 2-aad agab ayaa la sameeyay sanooyin khibrad daabacaadeed.
Marka laga soo tago dejinta ugu weyn, sida qoyska Suuqa Dugsiga Hoose, waxaan sidoo kale siinnaa Qorshaha Fasaxyada iyo Xarkaha si carruurteenna looga farxiyo. Sababtoo ah waxaan ognahay in xamaasadda iyo dhiirrigelintu ay ku hoos jiraan dadaal, oo waxaan rabnaa inaan wax yar ku soo kordhinno.
Si loo soo koobo, kaas oo si habsami leh loogu habeeyay loona diyaariyey qadarin kasta Macallinka Guriga Fasalka 2aad ee Fasalka Xilliga Xilliga Xagaaga Caruurteena qiimaha leh ama ardayda ku guuleysatay inay dhammaystiraan sanadka 2-aad waqtiga cusub ee waxbarashada una diyaargaroobay muddada cusub ee waxbarashadu waxay ku guuleysan doonaan guusha ardaydeenna si joogto ah. Waa inaad sameysaa oo dhan si aad u hubiso inay kani ku yaal boggeena buugga fasaxa xagaaga dalbashada bogga.
Buug hagaajinta tareenka
Demühderden Baadhis Lagu Sameeyo EU-da
Book of Reform Railway
Xarunta Dhismaha waxay qoreysaa Kitaabka Isku-xidhka
3. Madaarka ayaa galaya buugga Guinness Record of Records
Hindiya Mishiinka Kowaad ee Hindiya waxay soo saartaa buugga diiwaanka
Sahayda Caafimaadka Help ka Turkey si Koonfur Afrika